Home Wararka Musharaxiin lagu wado in aay tanaasulaan ka hor maalinta Doorashada
Waxaa magaalada Muqdisho ka socdo ololaha Doorashada Madaxweynaha waxaana si weyn isku bedelay jawiga ay ku socotay ololaha Doorashada kaddib markii uu maanta soo gaaray Cabdikarin Muuse Qalbi Dhagax oo horey u dhiibtay Dowladda Farmaajo iyo Xukuumaddii uu RW ka ahaa Xasan Cali Kheyre.
Sida ay ilo wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen MOL waxaa xalay iyo saakay si aad ah u socday wadahadalo iyadoo tiro Musharaxiin ah lagu wado in ay ka tanaasulaan damacoodii Masharaxnimo sababo lagu sheegay dhaqaalo la’aan iyo kuwo u tanaasulaya markey ogaadeen in Qalbi Dhagax uu ka mid yahay martida lagu casuumay in ay qudbado ka jeediyaan Teendhada ka hor inta aanay bilaaban Doorashada.
Musharaxiinta la sheegay in aay tanaasulayaan aya waxa ka mid ah
Cabdikariin Xuseen Guuleed (Dhaqaalo la’aan ayuu u tanaasulayaa)
Xasan Cali Kheyre (Qalbi Dhagax dartiis ayuu u tanaasulayaa)
Dr. Cabdinasir Cabdulle (Dhaqaalo la’aan ayuu u tanaasulayaa)
Waxaa kale oo jira Musharaxiin kale oo gaaraya ilaa 10 oo lagu wado in ay tanaasulaan maalinta Doorashada ka hor inta aanay bilaabin sida MOL loo sheegay.
Ma jiro wax dhaqaale ah oo ay heystaan Musharaxiinta sanadkaan 2022, sida ay laga soo xigtay Xildhibaanada isku maray Musharaxiinta.
Ma jiro ilaa iyo hadda Musharax bixiyay lacago laaluush ah, walow loo badinayo in Musharaxiinta qaar ay bixin doonaan sooryo Maalinta Sabtida ah
Previous articleHadal jeedintii Musharraxnimo ee Xasan Sheekh Maxaa Kaaga Baxay?
Next articleKheyre “Maku dhiiran doonaa in uu Qirto dhiibistii Qalbi Dhagax?”
Madaxweyne Waare”Itoobiya reer Hirshabeelle dhib xoogan ayeey ku heeysaa Dowladuna waa...